Edemede site na Matt Caldwell
Onye ọsụ ụzọ imewe email kemgbe 1999, ọ bụ onye guzobere Onye-oziNdị ọrụ Creative Services na-emeri (ndị ahịa gụnyere HP, Coca-Cola, At & T, eBay, Kodak, Microsoft, Intel, Warner Bros & ọtụtụ ndị ọzọ). Matthew nwetara akara ugo mmụta bachelọ na ahịa na Mahadum Indiana wee mụọ nka Art / Graphic na Pacific Northwest College of Art na Oregon College of Art & Craft. Matthew bụbu onye isi Creative Director maka ThrustMaster, Labtech, Logitech na @Once.
Chịkọta Usoro iji Mekwuo Nsonye Email Gị
Email agbapụtawo onwe ya n'ahịa kemgbe mmalite nke ikpo okwu. Ebe “ozi elektrọnik” gosipụtara n’ezi ozi nzi ozi oge n’ụdị na n’ọrụ, ngosipụta nke ikpo okwu pụtara na ozi ọ bụla kwesịrị ịbụ nke aka ya, na-eme mgbanwe ma na-emetụta ọtụtụ ndị na-ege ntị. N'afọ a, ndị na-ere ahịa kwesịrị ịkwụsị ịtụle teknụzụ email na ụzọ aghụghọ dị ka ngwa ọrụ naanị, mana kama dịka akụkụ nke nnukwu ihe mgbagwoju anya. Ime nke a ga - eme ka ndị na - ere ahịa nweta ihe, imepụta ihe ma nwee ọgụgụ isi